Fariinteena maalinta 15ka May ee ku socota mas’uuliyiinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed. - Anti Tribalism Movement : The ATM
Fariinteena maalinta 15ka May ee ku socota mas’uuliyiinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Waxa ay aheyd 15kii May 1943dii markii magaalada Muqdisha ee caasimadda dalka Soomaaliya lagu aas-aasay ururkii xornima-doonka Soomaaliyeed ee Somali Youth League (SYL), ama sidoo kale loo aqoon jiray Somali Youth Club (SYC). Wuxuuna ahaa ururkii ugu horeeyay ee noqday xisbi siyaasadeed ee laga aas-aasay gudaha dalka Soomaaliya.
Maanta oo ah 15ka May 2015ka ayay ku began tahay sanad-guuradii 72aad ee aas-aaskii SYL, waxaana muhiim ah in la is weydiiyo in ay hirgashay riyadii dhallinyaradii SYL? Ma la is dhihi karaa waxaa gebi ahaanba meesha ka baxday fikradii dhallinyaradii SYL ee aheyd in loo adeego danaha guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed?
Mise la oran karaa in maanta dhallinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ugu nasiibka daran ee ku dhammaaday dagaalada sokeeye, tahriibka iyo waliba dagaalo ku saleysan fikirka kooxo diimeedyo leh dana gaar ah? Yaase u maqan ama wax u qabanaya dhallinyarada Soomaaliyeed? Dhammaan su’aalahaan iyo su’aalo kaleba waxa ay ka mid yihiin su’aalaha ay is weydiinayaan in badan oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed.
Dhallinyarada Kacdoonka Ka Soo Horjeedka Qabyaaladda (Anti Tribalism Movement) ayaa qeyb ka ah ururada ay aas-aaseen, ayna hoggaanka u hayaan dhallinyara Soomaaliyeed oo ku kala nool dalka gudihiisa iyo dibadiisaba. Waxaana naga go’an in aan qeyb muhiim ah ka qaadano dhiiri-gallinta bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada oo ah kuwa ku dhimanaya ama ku dhaawacmaya dagaalada ku saleysan danaha gaarka ah.
Haddaba munaasabada 15ka May ee sanadkaan ayaa waxaan baaq ugu direynaa dhammaan mas’uuliyiinta Maamul Dowlad Goboleedyada iyo Dowaladda Federaalka ee Soomaaliya inay dhaqan galiyaan 5 qodob oo ku saleysan danaha guud:
In madaxda sare ee dalka ay si shaqsi ahaan ah ula kulmaan dhallinyarada si loo helo fikrado cusub oo ka yimid maskax baahi u qabta isbadal iyo horumar.
In mas’uuliyiinta Wasaaradaha Hiddaha & Dhaqanka, Ciyaaraha iyo Dhallinyarada ay qabtaan barnaamijyo wacyi-gallin ah oo joogta ah.
In mas’uuliyiinta Dowladaha Hoose ay wadooyinka, goobaha ganacsiga iyo meelaha la iskugu yimaado ay dhigaan boorar/astaamo ay ku qoran yihiin fariimo dhiiri-gallinaya is dhex-galka bulshada, muhiimada nabadda iyo isku soo dhawaanshaha dadka Soomaaliyeed.
In mas’uuliyiinta TV-yada, Radio-yaasha, Website-yada iyo guud ahaan bahda warbaahinta laga dhaadhiciyo inay hirgaliyaan barnaamijyo u gaar ah muujinta wanaaga, isku soo dhaweynta dadka iyo waliba muhiimada gaarka ah ee ay leedahay nabaddu.
Ugu danbeyn in culumadu ay kaalinta ugu muhiimsan ka qaataan ka hortaga dhallinyarada la marin-habaabiyay ama micnaha saxda ah ee diinta Islaamka oo la qaldo si loogu adeegsado dano gaar ah.
Marka waxaan umadda Soomaaliyeed meel waliba oo ay joogaan aan u rajeyneynaa guul, barwaaqo, isku duubnaan, wax wada-qabsi, horumar iyo Soomaalinimo Insha’Allah. Mahadsanidiin.